10-ka Faa'iidadood ee Caafimaad ee Glutathione Kaabis ah - - Wareegtadaada
Faa'iidooyinka 'Glutathione' noolaha siyaabo badan adoo u dhaqmaya sidii antioxidant. Waa isku-darka amino acid ee ku dhex jira unug kasta oo bani'aadam ah. Noole kasta oo nool wuxuu jidhkiisa ku leeyahay glutathione. Waa antioxidant awood badan oo markay joogaan heerar ku filan naga difaaci kara xaaladaha caafimaad ee halista ah sida cudurka Alzheimers, cudurka wadnaha, iyo xitaa istaroog.
In kasta oo antioxidant-ka lagu soo saaro unugyada jirkeena glutathione waa lagu duri karaa jidhkeenna, si toos ah ayaa loo dabaqi karaa, ama in lagu neefsado.
Glutathione waa isku-dhaf ay sameysay isku-darka seddex amino acids: cysteine, acid glutamic, iyo glycine, waa antioxidant awood leh oo ka hortaga iyo dib u dhaca gabowga unugyada. Glutathione waxay ka hortagtaa waxyeelada unugyada waxayna ka takhalustaa kiimikooyinka waxyeelada leh ee beerka waxayna awood u leeyihiin inay isku xiraan daroogada ka caawisa jirka inuu si fudud u dhaafo. Waxay sidoo kale qabataa shaqada muhiimka ah ee kor u qaadida xasaanadda jirka iyo nidaaminta koritaanka iyo dhimashada unugyada jirkeena. Heerarka glutathione ayaa la ogaaday inay ku yaraanayaan da'da.
1. Waxay ka caawisaa walaaca fekerka
Marka soo-saarka xag-jirka ee bilaashka ah ee jirka uu kordho, oo jirku uusan la dagaallami karin, waxay horseedaysaa walwal xagga sunta ah. Heerarka sare ee walaaca waxaay jirka ka dhigtaa inuu u nugul yahay xaaladaha caafimaad sida sokorowga, arthritis-ka, iyo kansarka. Glutathione waxay ka caawineysaa yareynta walaaca fekerka ee jirka ku dhaca kaas oo ka caawiya jirka inuu ilaaliyo jirradan.
Heerarka sare ee glutathione ee jirka ayaa sidoo kale loo yaqaanaa inay kordhiyaan heerka antioksidanter. Kordhinta daawada loo yaqaan 'antioxidants' oo ay weheliso glutathione waxay yareysaa walaaca fekerka.
2. Waxay hagaajin kartaa caafimaadka wadnaha
Glutathione, iyada oo leh awooddeeda ah in ay ka hortagto sunta dufanka jirka ee bini-aadamka, waxay gacan ka geysan kartaa yareynta dhacdooyinka weerarada wadnaha iyo cudurada kale ee wadnaha. Cudurrada wadnaha waxaa sababay uruurinta huurada halbowlaha oo ku urursan daboolida darbiyada halbowlaha.
Lipoproteins-ka cufan ee hooseeya (LDL), ama kolesteroolka xun, ayaa sababa huurada oo waxyeelo u gaysata xididdada gudaha ee halbowlaha. Dhagxaanadan ayaa dillaaca waxayna xannibi karaan xididdada dhiigga, joojinayaan socodka dhiigga isla markaana sababi kara wadne istaag ama istaroog.
Glutathione, oo ay weheliso enzyme loo yaqaan 'glutathione peroxidase', waxay hoos u dhigeysaa superoxides, hydrogen peroxide, xag-jiryo bilaash ah iyo peroxides-ka laf-dhabarta ah ee keena lumay-gaatada (xaydhka duxda). Tani waxay ka hortagtaa kolestaroolka xun inuu dhaawaco xididdada dhiigga sidaas darteed samaynta huurada. Glutathione ayaa sidaas darteed ka caawiya yareynta halista wadne istaagga iyo cudurada kale ee wadnaha.
3. Waxay ka difaacdaa unugyada beerka inay ku dhacdo aalkolada iyo cudurka dufanka leh
Marka ay jirto yaraanta antioxidants iyo glutathione, unugyo badan oo beerka ah ayaa u muuqda inay dhintaan. Tani waxay yareynaysaa awoodda beerka ee la dagaallanka beerka dufanka leh iyo cudurrada beerka ee khamriga. Glutathione, markay ku jiraan heerar ku filan waxay u egtahay inay kordhiso heerarka borotiinka, bilirubin, iyo enzymes ee dhiigga ku jira. Tani waxay ka caawineysaa shakhsiyaadka inay si dhakhso leh uga bogsadaan cudurada beerka dufanka leh iyo khamriga.
Mid sare qiyaasta glutathione oo si habsami leh loo maamulo shakhsiyaadka qaba cudurka beerka dufanka leh waxay muujiyeen in glutathione ay tahay daaweynta ugu waxtarka badan ee cudurka. Waxay sidoo kale muujisay hoos u dhac weyn oo ku yimid malondialdehyde, oo calaamadee u ah dhaawaca unug ee beerka.
Maahmaah ahaan loo maareeyay glutathione ayaa sidoo kale muujisay in antioxidant-ka uu saameyn wanaagsan ku yeeshay shaqsiyaadka la xanuunsan cudurka beerka ee dufanka yar.
4. Waxay ka caawisaa la dagaallanka sicir bararka
Sicirbararka ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee cudurada waaweyn sida cudurada wadnaha, kaadi macaanka, iyo kansarka.
Dhaawac ayaa sababa xididdada dhiigga ee aagga dhaawacmay si uu u fido si uu ugu oggolaado in dhiig badani ku daato aagga. Dhiigan waxaa ku xayiran unugyada difaaca jirka ee daadadku ku teedsan si ay uga hortagaan suurtagalnimada infekshan. Mar haddii aagga dhaawacmay ay bogsato, bararku wuu yaraadaa oo unugyada unugyadu waxay hoos u dhigaan tirada. Laakiin jir aan caafimaad qabin oo ay saameeyeen culeyska, sunta, cunnooyinka aan caafimaadka qabin sicirbararka si dhakhso ah hoos ugama dhici doono.
Glutathione wuxuu caawiyaa kiisaska kuwaan oo kale ah isagoo kor u qaada unugyada cad ee difaaca. Waxay xukumaan tirada unugyada cad ee taga aagga dhaawacmay iyada oo ku xidhan darnaanta sicir bararka.
5. Waxay hagaajisaa iska caabbinta insulin
Markii aan sii gaboobo heerarka glutathione ee jirkeena ayaa yaraada maadaama jirkeenu soo saaro glutathione ka yar iyo yaraanta. Tani waxay ku keentaa wax ka yar gubashada baruurta jirkeena. Jidhku wuxuu hayaa dufan badan. Tani waxay sidoo kale kordhisaa u nuglaanta insulin.
Cunto kordhisa heerka cysteine ​​iyo glycine ayaa waliba kordhin doonta wax soo saarka glutathione ee jirkeena. Jiritaankan sarreeya ee gulukooska ayaa ka caawiya iska caabbinta insulin weyn iyo gubashada dufanka badan.
6. Bukaanjiifka cudurada wadnaha ee ubucda ayaa arka dhaqdhaqaaqa wanaajiyey
Cudurka halbowlaha wadnaha wuxuu ku dhacaa dadka oo halbowlayaasha ay ku dhegaan wasakh. Cudurku wuxuu badanaa ku dhacaa lugaha qofka. Tani waxay dhacdaa marka xididdada dhiigga xidhmayaa aysan awoodin inay u fidiyaan xaddiga dhiiga looga baahan yahay muruqyada markii muruqyadu u baahdaan. Shakhsiyaadka ka cabanaya xanuunada ku dhaca wareega wadnaha waxay la kulmi doonaan xanuun iyo daal marka aad socoto.
Glutathione, oo si toos ah loo maamulo laba jeer maalintii, ayaa muujisay horumar muuqda oo ku saabsan xaaladooda. Shakhsiyaadka waxay awoodeen inay ku lugeeyaan masaafooyin dhaadheer mana ka caban wax xanuun ah.
7. Glutathione ee maqaarka
Faa'iidooyinka 'Glutathione' sidoo kale waxay gaarsiisan tahay sii wadidda maqaarka caafimaadka leh iyo daaweynta. Nabarrada, maqaarka qalalan, canbaarta, laalaabka, iyo indhaha oo isku jajaban ayaa lagu daaweyn karaa qiyaasta ku habboon ee loo yaqaan 'glutathione dose'.
Isticmaalka 'glutathione' ee maqaarka ayaa ka hortagaya tyrosinase, oo ah enzyme soo saarta melanin. Isticmaalidda 'glutathione' muddo dheer waxay ku dambayn doontaa maqaar jilicsan sababta oo ah soosaarka melanin ka yar. Waxaa sidoo kale la muujiyey in ay yareynayso cudurka 'psoriasis', oo ay wanaajiso bartiyeedka maqaarka, isla markaana ay yareynayso duuduubyada
8. Waxay yareysaa astaamaha cudurka Parkinson
Gariirku waa mid ka mid astaamaha ay dadku la il daran yihiin cudurka Parkinson inta badan la ildaran. Taasi waa sababta oo ah cudurku wuxuu ku dhacaa nidaamka neerfaha ee dhexe. Maamulka xididka ee glutathione wuxuu muujiyay horumar ka yimid shakhsiyaadka cudurka ka yimid. Daaweyntu waxay yareysay gariirkii iyo adkeyntii bukaanka la kormeerayay. Waxaa la rumeysan yahay in glutathione ay u fududeyn karto nolosha kuwa la ildaran cudurka Parkinson iyadoo la yareynayo astaamaha cudurka muujinayo.
9. Waxay ka caawisaa carruurta Autismka iyadoo yareyneysa waxyeelada sunta ah
Caruurta qabta cudurka Ootiisam-ka waxaa lagu muujiyay inay heer sare oo dhaawac maskaxeed ay ka gaareen maskaxdooda. Isla mar ahaantaana, heerarka glutathione aad ayey u yar yihiin. Tani waxay kordhisay halista ah in carruurtu u sii yeeshaan waxyeelada dareemayaasha ee kiimikooyinka sida meerkurida.
Caruurta lagu daaweeyay qiyaasta daawada glathione ee afka laga qaato iyo jirka la mariyo waxay muujiyeen horumar muuqda oo ah heerarka maadada plasma sulfate, cysteine, iyo heerarka glutathione-ga dhiigga. Tani waxay siinaysaa rajo ah in daaweynta glutathione ay hagaajin karto shaqada maskaxda sidaa darteedna, nolosha carruurta qaba cudurka autism.
10. Waxay gacan ka geysan kartaa la-dagaallanka cudurada iswada
Cudurada 'autoimmune diseases' waxaa ka mid ah cudurka baruurta, arthritis, iyo lupus. Cudurradani waxay sababaan caabuq joogto ah iyo xanuun taas oo kordhinaysa walbahaarka oksida. Glutathione waxay xakameyn kartaa jawaabta jirka ee jirka iyadoo la kicinayo ama la dhimayo. Tani waxay siineysaa dhakhaatiirta inay yareeyaan buufiska oksidheer ee shakhsiyaadka qaba jirrooyinka iswada.
Cudurada autoimmune waxay baabi'iyaan unugyada mitochondria unugyada qaarkood. Glutathione waxay gacan ka geysataa ilaalinta unugyada mitochondria iyadoo lala dagaallamayo xagjirnimada. Glutathione waxay kicisaa unugyada cad iyo unugyada T ee la dagaallama caabuqa. Unugyada T ee ay ku sumoobeen glutathione waxay muujiyeen awood kordhaysa oo lagula dagaallamo caabuqyada bakteeriyada iyo fayruuska.
Markii jirku sii gaboobo, heerarka glutathione ee jirka ayaa yaraanaya. Waxaan u baahanahay inaan cunno cunnooyinka ka caawin doona jirka inuu soo celiyo heerarka glutathione. Waxaa jira cunnooyin badan oo ay ku jiraan glutathione si dabiici ah ama 'glutathione' oo kor u qaada nafaqada.
Ilaa iyo inta ay cuntadu ku badan tahay 'glutathione', borotiinka whey-ka waxaa ku jira gamma-glutamylcysteine. Taasi waa isku darka glutathione iyo cysteine ​​taasoo u sahleysa jirkeena inuu kala saaro labada amino acids. Labaduba waa antioxidants wanaagsan.
· Cunnooyinka Allium
Daawooyinka glathionion ee wanaagsan waa cuntada laga helo dhir ay leeyihiin allium hidde ahaan waxay hodan ku yihiin baaruudda. Sulfur-tu waxay ka caawisaa jirkeena inuu soo saaro gil-galka dabiiciga ee badan. Basasha, toonta, ubaxa, jalaatada, shaashad, iyo caleemaha ayaa ah cuntooyinka ay leeyihiin hidde-wadaha.
· Khudradda cagaaran
Khudaarta Cruciferous waxaa ku jira glucosinolates taasoo kor u qaadi doonta heerarka glutathione ee jirkaaga. Taasi waa sababta dhirta dhirta sidda ay u leeyihiin caraf udgoon.
Kaabashka, caleenta, liinta, qumbaha, bok choy, biraha cadarka leh, arugula, radissh, watercress, iyo cagaarka iskujirta ayaa dhammaantood ah khudradda iskutallaabta lagu qodbo.
· Cunnooyinka leh alfa-lipoic acid
Hilibka lo'da, hilibka xubinta, isbinaajka, khamiirka qamriga, iyo yaanyada ayaa ah kaabis wanaagsan oo glutathione maadaama ay hodan ku yihiin alfa-lipoic acid. Aids Tani waxay dib u soo noolaysaa oo waxay kor u qaadeysaa heerarka glutathione ee jirkaaga.
· Cuntooyinka hodanka ah ee Selenium
Sida raad-abuurka macdanta selenium wuxuu jirka ka caawiyaa kordhinta heerarka glutathione iyo antioxidant-ka kale ee jirka ku jira. Cunnooyinka ay kujirto "selenium" waa oyster, cuntooyinka badda, ukunta, miraha loo yaqaan "brazil nuts", dhir, boqoshaada, iyo miraha dhan.
Kaabsooraha hunguriga yimaadaan noocyo kala duwan. Waxaa lagu qaadan karaa afka. Laakiin glutathione afka ah maahan kuwo wax ku ool ah dib u buuxinta heerarka jirka ee xarunta.
Qaabka ugu wanaagsan ee loo qaato qaadashada 'glutathione supplement' waa inaad ku qaadatid liposomal glutathione calool madhan. Waxyaabaha ay ka kooban tahay glutathione firfircoon waxay ku jirtaa bartamaha liposomes. Qaadashada kaabiskan hadal ahaan waa habka ugu wanaagsan ee lagu kordhin karo heerka glutathione ee jirka.
Glutathione sidoo kale waa lagu neefsan karaa sunta loo yaqaan 'nebulizer'. Laakiin waxaad u baahan doontaa warqad dhakhtar si aad u isticmaasho.
Transdermals iyo looshinnada ayaa la heli karaa oo si kor loogu dabakhi karo. Heerkooda nuugista waa mid isbeddela oo mararka qaarna aan lagu kalsoonaan karin.
Maamulka ku-habboon ka-hortagga ayaa ah habka ugu tooska ah ee loo qaato kaabsoo-jirka. Sidoo kale waa habka ugu faafin badan.
Ku-darka dheeraadka ah ee 'Glutathione' wuxuu leeyahay waxyeelo aan badnayn. Kuwaani waxay u dhaxayn karaan dhiig karka calool xanuun, gaas. saxarado dabacsan, iyo falcelin xasaasiyadeed. Waxaa wanaagsan inaad la tashatid takhtarkaaga kahor intaadan qaadan kaabsootiyeyaasha jirka.
Qiyaasta glutathione ee looga baahan yahay qofka waxay ku kala duwanaan kartaa da'da qofka, culeyskiisa, iyo jir ahaan. Waxay sidoo kale ku xirnaan kartaa xaaladdiisa caafimaad iyo taariikhdiisa caafimaad. Way ka fiican tahay inaad la tashato dhakhtarkaaga si aad u hubiso qiyaasta dheeraadka ah ee ay tahay inaad qaadato.
Glutathione waa unug muhiim u ah jirkeena. Waa antioxidant awood leh wuxuuna ka caawiyaa jirka inuu ilaaliyo baaritaanka xag-jirka. Tani waxay naga dhigeysaa caafimaad iyo qeybaha cudurada sida dhibaatooyinka wadnaha, kansarka, iyo wadne istaaga.
Waa muhiim in la joogteeyo heerka ugu fiican ee gulukooska ee jirkeena. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo aan taas ku samayn karno taas. Waxaan cuni karnaa cunno hodan ah 'glutathione', waxaan qaadan karnaa afka 'glutathione', waxaan si toos ah u dalban karnaa si toos ah ayaa loo maareeyaa.
Raadso talo caafimaad markasta oo aad go'aansato inaad qaadato supplementska glutathione si aad wax uga badasho heerka jirkiisa.
Rouhier N, Lemaire SD, Jacquot JP (2008). "Doorka glutathione ee noolaha photosynthetic: howlaha soo baxaya ee glutaredoxins iyo glutathionylation". Dib-u-eegista Sanadlaha ah ee Bayoolajiga Dhirta. 59 (1): 143-66.
Franco, R.; Schoneveld, OJ; Pappa, A .; Panayiotidis, MI (2007). "Doorka dhexe ee glutathione ee cudurada wadnaha ee cudurada aadanaha". Archives ee Physiology iyo Biochemistry. 113 (4-5): 234-258.
1. Waa maxay Glutathione?
4.Glutathione Cuntada dheeriga ah